Yini uKristu wamanga? Ubonakala kanjani uKristu wamanga? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Okwedlule：Kusho ukuthini "ukushiya konke bese ulandela uNkulunkulu"?
Okulandelayo：Kuyini ukulandela uNkulunkulu?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngikanye nani, kod…
(1) Ukubaluleka kokuba uNkulunkulu ethatha igama likaJehova Ngenkathi Yomthetho Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UNkulunkulu wathi futhi kuMose, Uza…